Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in amniga Muqdisho aanu dowladda gacanta ugu jirin 100% – STAR FM SOMALIA
Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada ee Gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar ayaa sheegay in amniga magaalada Muqdisho aanu dowladda gacanta ugu jirin %100, isagoo xusay in magaalada ay u muuqato xero ciidan.
Waxaa uu sheegay in magaalada ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan, oo isugu jira kuwo gaar loo leeyahay, kuwaasoo xirtay waddooyinka.
“Amniga Muqdisho dowladda gacanta uguma jiro %100, waxaa muuqata in magaalada xero ciidan oo kale inay tahay, Ciidamo hey’ado gaar loo leeyahay iyo Ilaalada Hotelka ayaa jira oo waddooyinka qaar xirta”ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in maamulka Gobolka Banaadir ay sanadkan ka go’an tahay inay isku furaan waddooyinka xiran ee magaalada Muqdisho.
Inta badan wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhooban ciidamo aad u fara badan oo isugu jira nuucyada kala duwan ee Ciidanka , mana jiro ciidan gaar ah oo la oran karo waxaa ay u xilsaaran yihiin suggitaanka Amniga Muqdisho.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo maanta yeelanaya kulankooda labaad ee Kalfadhiga 1aad